फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ? Canada Nepal
काठमाडौं - शुक्रबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बिहिबार तोलामा ५ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज पनि तोलामा ६ सय रुपैयाले घटेको हो । यसअघि बुधबार तोलामा ९ सय रुपैयाले सुनको मूल्य बढेको थियो ।
बिहिबार प्रतितोला ८९ हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ८९ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ८८ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य तोलाको ११ सय ६० रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।
आश्विन ८, २०७८ शुक्रवार ११:१६:२२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९० हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ९० हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य तोलामा ५ रुपैयाले बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य बढेर तोलाको ११ सय ८० रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।
आश्विन २५, २०७८ सोमवार १२:१५:५२ बजे : प्रकाशित
दशैंमा पनि यी बैंकहरू खुल्ने, कुनको शाखा कति बेला खुल्छ ?
काठमाडौं - नेपालीहरुको महान चाड दशैं शुरु भइसकेको छ । दशैं शुरु भएपछि धेरै बैकका विभिन्न शाखाहरु बन्द भएका छन् । यस्तै ग्राहकको सुविधाको लागि बैंकहरुका विभिन्न शाखाहरु खुल्ने भएका छन् ।
दशैंमा पनि सेवाग्राहीलाई सेवा–सुविधा दिन विभिन्न शाखामा फरक फरक समय तोकिएको छ । बैंकहरुले निश्चित स्थानका शाखाहरूमा समयसीमा तोकेर बैंकिङ सेवा दिने भएको छ । तल हेर्नुहोस् कुन बैंकको कुन शाखा कहिले कति बजेदेखि खुल्छ ।
बागमती प्रदेशः बैंक खुल्ने– बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म
बागबजार, भक्तपुर (सूर्यविनायक), ग्वार्को कलंकी, महाराजगंज, नारायणगढ
कर्पोरेट शाखा, पेप्सीकोला, सातदोबाटो, बौद्ध सामाखुसी, हेटौंडा
नवमी पुल्चोक, बनेपा, सुकेधारा, थानकोट, न्यूरोड खिचापोखरी, हाकिम चोक
हेटौंडा, नारायणगढ सतुङ्गल, सितापाईला, न्यूरोड विशाल बजार, डिल्लीबजार, महाराजगञ्ज, कीर्तिपुर बालाजु बौद्ध, लाजिम्पाट, कौशलटार, जावलाखेल, ठमेल,
भक्तपुर (सूर्यविनायक), गोंगवु
प्रदेश नम्बर १ः बैंक खुल्ने– विहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म
नवमी बिर्तामोड, दमक, धरान, पुष्पलाल चोक
एकादशी बिर्तामोड, पन्द्रगढी, इलाम बुधवारे, दमक, उर्लाबारी सुरुद्रा, पथरी, धरान, गाईघाट, मुम्का, हिले, ओखलढुङ्गा, बिराटनगर, इटहरी, बिराटचोक, पुष्पलाल चोक
प्रदेश नम्बर २ः बैंक खुल्ने– बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजे सम्म
वीरगञ्ज, गौर जितपुर लंगडी बागमती, हरिवन, मलंगवा, वर्दिवास, कविलासी, लाहान जनकपुर
लिङ्गरोड, चन्द्रनिगाहपुर कलैया, लंगडी, लालबन्दी, गौशाला (महोत्तरी), सम्सी,
बरहथवा मिर्चेया, पिडारी चोक
पावरहाउस चोक वीरगञ्ज, और निजगढ, हरिवन, मलंगवा, हरिपुर्वा, बर्दिवास, लाहान, जनकपुर
वीरगञ्ज, लंड्डी, कलैया, जितपुर निजगढ़, चन्द्रनिगाहपुर, गौर, हरिवन, मलंगवा, लालबन्दी, बेलवास, सम्सी, गौशाला, बर्दिवास, जनकपुर, पिडारी चोक, महेन्द्रनगर, धनुषा निर्देशा, सिराहा गोलबजार लाहान, राजविराज
गण्डकीः बैंक खुल्ने– बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म
कावासोती बागलुख, दमौली, न्यूरोड पोखरा, बगर, पावरहाउस चौक
कुस्मा, दुलेगौंडा, दलदले पोखरा महेन्द्रपुल, बाझापाटन, बुढीबजार
गैडाकोट, बेनी, लेकसाईड लेखनाथ अमरसिंह चोक
दलदले, कावासोती, गैडाकोट, दमौली, कुस्मा, बागलुङ, न्यूरोड पोखरा लेखनाथ, बिरौटा, पोखरा महेन्द्रपुल
लुम्बिनीः बैंक खुल्ने– बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म
भैरहवा, राजमार्ग चौराहा बुद्धचोक (भैरहवा), धकधही मणिग्राम, बुटवल, तानसेन, नेपालगन्ज, तुलसीपुर घोराही, कोहलपुर
बुद्धचोक (भैरहवा), राममन्दिर लाईन, तुलसीपुर
नवमी देविनगर, कोहलपुर
जितपुर ४ नम्बर, मणिग्राम, राजमार्ग चौराहा, तौलिहवा, बर्दघाट, बुटवल, परासी, तानसेन, घोराही तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज
कर्णालीः बैंक खुल्ने– बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म
सुदूरपश्चिमः बैंक खुल्ने– बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म
धनगढी चौराहा, महेन्द्रनगर, बौलिया, टीकापुर, दार्चुला, डडेलधुरा
धनगढी (हस्पिटल लाइन), महेन्द्रनगर अतरिया लम्की, जोशीपुर,
धनगढी चौराहा, बेदकोट धनगढी (हस्पिटल लाइन)
धनगढी चौराहा, धनगढी (हस्पिटल लाइन), अतरिया, महेन्द्रनगर, बेदकोट, चौमाला, बौनिया, टिकापुर, जोशीपुर, हसुलिया, लम्की करदाता विस्तारित काउन्टर, साफेबगर, डडेलधुरा
प्रदेश नं. १ः कारोबार समय १० बजेदेखि १ बजेसम्म मात्र
असोज २६ मंगलबार
असोज २७ बुधवार
प्रदेश नं. २ः कारोबार समय १० बजेदेखि १ बजेसम्म मात्र
वीरगञ्ज, जनकपुर, कलैया, गौर, सिराहा, राजविराज, जलेश्वर
असोज २७ बुधबार
बागमतीः कारोबार समय १० बजेदेखि १ बजेसम्म मात्र
भोटाहिटी, ललितपुर, सुर्यविनायक, बालाजु, बानेश्वर, टेकु, थापाथली
मुख्य शाखा कार्यालय बिशालबजार, महाराजगञ्ज, ठमेल,कलंकी, थापाथली, गौशाला
असोज २८ बिहीबार
दरवारमार्ग, पुल्चोक, ठिमी, बौद्ध, नक्साल,
गण्डकीः कारोबार समय १० बजेदेखि १ बजेसम्म मात्र
लुम्बिनीः कारोबार समय १० बजेदेखि १ बजेसम्म मात्र
कर्णालीः कारोबार समय १० बजेदेखि १ बजेसम्म मात्र
सुदूरपश्चिमः कारोबार समय १० बजेदेखि १ बजेसम्म मात्र
आश्विन २६, २०७८ मंगलवार १२:२७:१८ बजे : प्रकाशित
पोखरा - आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ अर्व रुपैयाँ खर्च भएन । २४ अर्व बजेटमध्ये करिब ३० प्रतिशत खर्च हुन नसकेको हो । त्यसमाथि २ अर्ब ऋण सरकारले उठाउन सकेन । उक्त वर्ष ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा ११ अर्ब ६६ करोड खर्च हुन सकेन । ३२ अर्व १३ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६३.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ३४ अर्ब ८४ करोड बजेटमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ९१ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सुरुका वर्षहरुमा बजेट खर्च गर्ने संरचनाहरुको निर्माण भएको थिएन । कानुन बनेका थिएनन् । अहिले मन्त्रालयपिच्छे जिल्लास्तरीय कार्यालय खुलेका छन् । आवश्यक्ता अनुसारका कानुन बनेका छन् । चालु खर्चको आकार पनि अत्यधिक बढेको छ । आधार वर्षमा २९ प्रतिशत मात्रै रहेको चालु खर्च अहिले ४४ प्रतिशत पुगेको छ । बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्यो भने प्रदेशको संचित कोष नकारात्मक हुने अर्थ विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले यो वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ । बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेसँगै गण्डकीलाई स्रोत जुटाउने समस्याले पिरोलेको छ । ‘खर्चको फाँटहरू बढेका छन् । ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुँदा सन्चित कोष माइनसमा जाँदैन र जान दिनु हुँदैन,’ अर्थमन्त्री रामजी बरालले भने, ‘आन्तरिक स्राेतलाई बढाउने सोचिरहेका छौं । बजेटको आकार, स्राेत बढाउनेस्थिति र संघबाट बजेट ल्याउन सक्ने वातावरण बनेको हुँदा माइनसमा जाँदैन भन्ने लागेको छ ।’
उनले भनेझैं आन्तरिक आम्दानी बढ्ने बलियो स्राेत पनि छैन । करिब ५ अर्बमात्रै आन्तरिक आम्दानी उठ्ने अनुमान छ । तर, अघिल्लो वर्षहरूमा हेर्दा लक्ष्यको ५० प्रतिशत हाराहारी पनि आन्तरिक आम्दानी भएको देखिँदैन । कोरोना संक्रमण, नयाँ स्रोत खोज्न नसक्नु र राजस्व क्षमता बढ्न नसकेको कारण आम्दानी बढ्ने सम्भावना खासै छैन ।
प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, पर्यटन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर उठाउन पाउँछ । अहिले सवारी र घरजग्गा कर उठाइरहे पनि अरु शीर्षकमा कर लगाउन सकेको छैन । बजेट अनुमानअनुसार नचल्नु अर्थ अनुशासनको हिसावले गम्भीर समस्या हो ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव बजेटमै गरे पनि ऋण लिने बाटो बनाएको छैन । ‘ऋण लिने खालको वातावरण बनेको छैन । कोभिडले थला परेको अवस्था छ । दोश्रो चौमासिक अन्तमा पुग्दा आन्तरिक स्राेत बढाउने र संघको बजेटसँगै खर्चको गति हेरेर ऋण लिने नलिने टुंगो लगाउछौं,’ उनले थपे, ‘नीतिमा आन्तरिक ऋणको परिकल्पना गरेका छौं भने त्यो कानुन बनाउनुपर्छ । विधेयक अधिवेसनमा ऋण लिने कानुन बनाउन प्रयास गर्छौं ।’ चालु वर्षमा २ अर्ब ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । हालसम्म कुनै वर्ष पनि ऋण लिइएको छैन ।
सरकारले बजेट भन्दा धेरै योजना छानेका कारण बजेट कार्यान्वयनका बेला झनै सकस पर्ने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले बताए । ‘सोचे अनुसार आन्तरिक आम्दानी छैन । संघले दिने भनेको बजेट पनि अन्तिम समयमा रोकिदिन्छ,’ उनले भने, ‘कोषमा भएको पैसाभन्दा धेरै योजना छानेका छौं । अस्वभाविक घाटा बजेट ल्याउँदा स्रोत खोज्न मुस्किल पर्न थालेको छ ।’ धेरै बजेट खर्च भए काम रोक्नु भन्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष ३० अर्वको बजेट ल्याएपनि २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन थाले योजना कार्यान्वयन नै रोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला पनि स्राेतको खोजी गर्न सरकार चुकेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च बढेपनि कामको प्रभावकारिता खासै राम्रो छैन । त्यसमाथि बजेटको आकार मात्रै बढाउने र रकम नबढ्ने बाध्यता हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘अब छानिएका योजना कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक आम्दानी बढाउनै जोड गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।’
अर्थविज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रदेश सरकार भएको महसुस नागरिकले गर्नै नपाएको बताए । ‘सरकारसँग स्राेत छैन । जनतासँग धेरै अपेक्षा र आशा छन्,’ उनले भने, ‘योजना छनोट मनपरि गरिएको छ । त्यसको स्राेत सुनिश्चित भएको छैन । यसले बजेटमा कस्तो असर गर्छ सरकारले हेक्का नै गरेको छैन ।’
यो वर्ष ३० अर्व ३ करोडको बजेट ल्याइएको छ । चालु खर्च १३ अर्ब ६ करोड र पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ७३ करोड छ । संघको अनुदान र आन्तरिक आम्दानीबाट ४ अर्ब १० करोड बजेट कम हुने र त्यसमा चालु वर्षमा खर्च हुन नसकेको २ अर्ब १० करोड तथा बाँकी २ करोड ऋण लिने बताइएको छ । यो वर्ष संघ सरकारले वित्तीय समानीकरणमा ७ अर्ब ४२ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड दिने बताइएको छ । राजश्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड, रोयल्टीबाट ३० करोड प्राप्त गर्ने अनुमान प्रदेशको छ । न्युज कारखाना
आश्विन ३१, २०७८ आइतवार १३:३६:१९ बजे : प्रकाशित
ग्लोबल आइएमई बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो ३ नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
काठमाडौं । आफ्ना ग्राहकहरुलाई सजिलो बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ३ नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यस बैकले इलामको देउमाई नगरपालिका वडा नं. ७, पञ्चमी बजार, पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाँउपालिका वडा नं. २, सरदेवा र मोरङ जिल्लाको कटहरी गाँउपालिका वडा नं. ४ मा नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
बैकिङ्ग सेवाको पहुँच देशभर पुयाउने उद्देश्यसहित बैंकले विभिन्न स्थानमा शाखाहरु विस्तार गरिरहेको छ । थप नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा आएसँगै शाखारहित संख्या २ सय ६० पुगेको छ ।
आश्विन ३१, २०७८ आइतवार १८:५०:३२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकले रु ११ अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रिया मार्फत ट्रजरी बिलको आजदेखि बिक्री गर्न लागेको हो ।राष्ट्र बैंकले ९१ दिन अवधिको रु २० करोड, १८२ दिन अवधिको पाँच अर्ब र ३६४ दिन अवधिको रु छ अर्ब गरी जम्मा रु ११ अर्ब २० करोड बराबरको टे«जरी बिल जारी गर्न लागेको बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
९१ दिन अवधिको टे«जरी बिल आगामी माघ ४ गते परिपक्व हुनेछ भने १८२ दिने बिल आगामी वैशाख छ र ३६४ दिने बिल २०७९ साल कात्तिक १ मा परिपक्व हुनेछ । यसअघि बैंकले गत असोज २५ गते रु १३ अर्ब २५ करोड बराबरको टे«जरी बिल जारी गरेको थियो ।
टे«जरी बिलको बोलकबोल अनलाइनमार्फत आज दिउँसो ३ बजे खुला हुनेछ । आज हुने बोलकबोलमा सहभागी क, ख र ग वर्गका बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक तथा वित्तीय संस्था, सङ्गठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकमध्ये सर्वाधिक अङ्क कबोल गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ ।
के हो टे«जरी बिल -मुद्रा बजारको एक प्रमुख उपकरणको रुपमा रहेको टे«जरी बिल एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम) अवधिको स्रोत जुटाउन राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको माध्यमबाट बहुबोल मूल्य विधिअनुसार यस्तो बिल जारी गर्नेगर्छ । अठ्ठाइस दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी चार किसिमको टे«जरी बिल केन्द्रीय बैंकले जारी गर्दछ । नेपालमा हाल २८ दिने टे«जरी बिल प्रचलनमा आएको देखिँदैन ।
कार्तिक १, २०७८ सोमवार ०८:३३:५८ बजे : प्रकाशित